Nanao herisetra… : Vazaha frantsay saika niharan’ny fitsaram-bahoaka | NewsMada
Nanao herisetra… : Vazaha frantsay saika niharan’ny fitsaram-bahoaka
Raha tsy tonga haingana ny mpitandro filaminana, saika ratsy ny nahazo ity vazaha lahy iray, teratany frantsay, tany Antsirabe, afakomaly. Nanimba zavatr’olona izy io noho ny hatezerana. Niitatra tamin’ny fikasihan-tanana izany, ary nampitangorona ny olona nitaky fitsaram-bahoaka ho an’ity vazaha ity. Nentin’ny mpitandro filaminana niala teny an-toerana haingana izy.
Araka ny fanazavana, nanao fanentanana amin’ny fetin’ny faran’ny taona ny toeram-pivarotana iray any Antsirabe ka nampiasa zavamaneno. Nolazain’ilay vazaha fa manelingelina azy izany raha nisakafo tamina hotely iray tsy lavitra ilay tranombarotra izy. Nitsangana izy io, ary nobatainy ny “baffle” iray ary nazerany tamin’ny tany. Voasakan’ny mpiambina izy raha mbola nikasa hibata ny “baffle” faharoa.
Teo no raikitra ny fifanjevoana ary nokendain’ilay vazaha ilay mpiambina. Nisy mpitari-posy saika hanampy ity farany, saingy tsy nahatohitra ilay vazaha ihany koa io. Tamin’izay no nitangorona ny olona ary saika hanao fitsaram-bahoaka tamin’ilay vazaha, ka tonga tampoka ny mpitandro filaminana. Voalazan’ny olona any an-toerana fa matetika manao karazana herisetra toy izao ity vazaha ity fa jerem-potsiny. Milaza ny tsy hanaiky anefa ny tompon’ny toeram-pivarotana tamin’ity zava-nitranga ity ka hametraka fitoriana.
Mahazo vahana eto amintsika ny fitsaram-bahoaka. Ny teratany vahiny koa, etsy andaniny, manome irika ahatongavan’ny olona amin’izany. Raha sanatria ka matin’ny olona teo ity frantsay ity, mahazo loza indray ny firenena na teo aza ny mety ho fahadisoany. Tokony ho fantatry ny olona koa anefa fa fandikan-dalàna ny fitsaram-bahoaka, ary mety mampigadra izay manao izany. Amin’ny taona vaovao, heverina fa tsy hisy intsony ity trangan-javatra mampalahelo ity.